Ikhona lepharadesi - I-Airbnb
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Luc
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 13.
I-gite yethu enkulu iyindawo eyingqayizivele enkabeni yendlu eyi-1 ha endaweni yokulondolozwa kwemvelo ye-Les Deux Ourthes. Uzoyijabulela ngokunethezeka, ukubukeka kwayo okuvulekile, ikhwalithi yokuhlobisa, ukubuka, ukuzola noma amathuba okuba nephathi (ngokuzwakalayo) ngaphandle kokukuphazamisa. Ilungele imindeni (enezingane), amaqembu amakhulu futhi ifanelekile njengendawo yokuziqeqesha (imidlalo yaseshashalazini, umculo,...) ngenxa yenqolobane yayo enkulu.
Isaphulelo SOKUHLALA ISIKHATHI ESIDE : bheka "eminye imininingwane"
Indlu yethu iyindawo egcwele ubuntu, ejabulisayo, enobuntu obunamandla obuhlanganisa "izinto zakudala" (ifenisha yasekuqaleni) kanye nesimanje (ukunethezeka).
Kuyinto enhle yomndeni eyaqala eminyakeni engaphezu kwamashumi amathathu edlule. Konke ukuguqulwa kwesifundazwe sasepulazini kulokho kokuhlala kwakwenziwa ngumakadebona wethu, umalume, abazali kanye nezizukulwane ezilandelayo... kuhlanganise nathi, kusukela ngo-2006 (ukulungiswa okuphelele ngo-2011 kanye nesakhiwo esengeziwe ngo-2016).
Sikhethe ngokuzithandela ukwethembana ngokukunikeza indlu yonke, kunokukhiya, ukususa ama-knickknacks ayigugu, noma ukubeka isimo esidinayo sokudlala ngenxa yobukhulu bendlu.
Ngokufanayo, siyabonga ngokusekela ukwethembana kwethu.
Ngakho siyakujabulela ukwabelana ngale ndawo esiyithandayo nawe, sithemba ukuthi izokujabulisa futhi ikuhloniphe.
Ngomoya ofanayo, ukuhlinzekwa kwendlu akunayo injongo yakudala, ngaphandle kokuvumela ukunakekelwa nokuthuthukiswa kwendawo enkulu.
Le ndlu itholakala endaweni encane eyakhiwe izindlu ezintathu, edolobheni laseSainte-Ode, phakathi kweSaint-Hubert neBastogne. "Isiqephu sethu esincane sepharadesi" sitholakala ekugcineni kwe-cul-de-sac, amamitha angu-100 ukusuka epulazini elikhulu. Ngakho-ke akukho zimoto phambi kwendlu. Indawo ithule kakhulu njengoba i-hamlet iwela umgwaqo womnyango (amamitha ayi-100 ukusuka endlini) lapho kudlula khona izimoto eziyi-10 kuye kwezingama-20 ngosuku kanye nezinqola ezimbalwa zezolimo. Isakhiwo sisemngceleni wehektare elingu-1 lomhlaba wangasese (igceke lamatshe, ingadi yokuzijabulisa, insimu yezithelo kanye nezinkuni ezincane ezi-3, indawo yokosa inyama)
Uma kwenzeka kuba nokukhathazeka, siyohlala sifinyeleleka (ukushintshisana nge-imeyili nocingo). Umakhelwane wethu kanye nomngane wethu ongumlimi nabo bayoba onakho kukho konke ukuhlala kwakho.